ဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော်ပွား နှစ်ဆူဖူးမျော်နိုင်ပြီ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော်ပွား နှစ်ဆူဖူးမျော်နိုင်ပြီ
Posted by ဦးေကာက္ on Aug 6, 2011 in Copy/Paste | 15 comments
မမျှော်လင့်ဘဲနှင့် ရုတ်တရက်ကြွရောက်လာသောတရုတ်ပြည် ပီကင်းမြို့ ဆင်ခြေဖုံး ရှုခင်းကောင်းလှသည့် အနောက်ဖက်တောင်ကုန်းများပေါ်ရှိ (လိကွမ်း)ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတော်အတွင်းတွင် တည်ရှိခဲ့ပြီးဤမြတ်ဗုဒ္ဓစွယ်တော်သည် တရုတ်ပြည်တွင် ကိန်းဝပ်စံပယ်တော်မူသည်မှာ နှစ်ပေါင်း (၁၅၀၀) ကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။၎င်းဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော်ပွားအား ၂.၈.၂၀၁၁၁ (အင်္ဂါနေ့) နေ့လည် (၂းဝ၀) နာရီအချိန်တွင် ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှ ပြည်မြို့ ရွှေပေါက်ပင်တောရကျောင်းတိုက်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသောမာစာရဦးစီးပင့်ဆောင်ခဲ့သည်။
ပြည်မြို့ ရွှေပေါက်ပင်တောရကျောင်းတိုက်သို့ မပင့်ဆောင်မီရန်ကုန်မြို့၊ မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်၊ ဗိုလ်မှူးဗထူးလမ်းပေါ်ရှိ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)သို့ ခေတ္တခဏကိန်းဝပ်အပူဇော်ခံယူခဲ့ရာ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) ဝန်ထမ်းများ၊ အသင်းသူ/သားများ၊ ရွှေပေါက်ပင်ဆရာတော်ကြီး၏ တပည့် ဒါယကာ၊ ဒါယကာမများနှင့် “အိုကေ” ကုသိုလ်ဖြစ်သာသနာပြု ရှမ်းတီးဝိုင်းအဖွဲ့တို့မှ အနီးကပ်ဖူးမြော်ခဲ့ကြပြီးနောက် နေ့လည် (၃း၃၀) နာရီအချိန်တွင် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)မှ ပြန်လည်ပင့်ဆောင်ကာပြည်မြို့ရွှေပေါက်ပင်တောရကျောင်းတိုက်တွင် အပူဇော်ခံထားရှိရန်အတွက် ဆရာတော်ဘဒ္ဒန္တသောမာစာရ၊ ဥက္ကဌဦးကျော်သူနှင့်အတူအသင်းသားများတို့မှ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပြည်မြို့သို့လိုက်ပါပြီးဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော်ပွားအားပင့်ဆောင်ကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
ဗုဒ္ဓစာပေသမိုင်းမှတ်တမ်းများအရ မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူ၍ တေဇောဓါတ်လောင်ပြီးသောအခါ လူ့ပြည်၌ စွယ်တော်နှစ်ဆူကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ တစ်ဆူအားသီဟိုဋ္ဌ်ကျွန်း (သီရိလင်္ကာ)သို့ ပင့်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးကျန်တစ်ဆူအား ရှေးဟောင်းဥဒျာနပြည်သို့ ပင့်ဆောင်သွားခဲ့ပါသည်။ ခရစ်နှစ် ငါးရာစုနှစ်အတွင်းမှ စတင်၍ မင်းဆက် အဆက်ဆက်ကာလအတွင်းတရုတ်ပြည် အလယ်ပိုင်း၌ တိုင်းပြည် မငြိမ်မသက် ဖြစ်ပွားနေစဉ် စွယ်တော်အားတစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ ပင့်ဆောင်ယူခဲ့ကြပြီးနောက်ဆုံး၌ တရုတ်ပြည် မြောက်ပိုင်းရှိ လျောင်မင်းဆက် မြို့တော်ဖြစ်သောယယ့်(န်)ကျင်း (ယခုပီကင်း) မြို့သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ (အေဒီ ၁၀၇၁ ခု၊ ဩဂုတ်လ ၂၈ ရက်မှ စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက် အတွင်း)၌ ဗုဒ္ဓစွယ်တော်ကိုကျောက်ယှီး-ယ်န်စေတီတော်၌ ဌာပနာခဲ့ကြောင်းဖော်ပြပါရှိသည်။ ဤ သို့ဖြင့် ဗုဒ္ဓစွယ်တော်သည် ပီကင်းမြို့တော်သို့ ရောက်ရှိလာခြင်းပင်ဖြစ်တော့သည်။
ကျောက်ယှီး-ယ်န်စေတီတော် တည်ရှိရာလိကွမ်းဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် ခရစ်နှစ် (၈)ရာစုကတည်ထောင်ခဲ့သောကျောင်းဖြစ်သည်။ စွယ်တော်မြတ် ကိန်းဝပ်ရာ အထပ်ဆယ်ထပ် ပါရှိသော ရှစ်မြောင့်ပုံစေတီတော်ကို ကျောင်းဝင်း၏ အရှေ့တောင်ထောင့်တွင် တည်ထားသည်။ စေတီတော် အုပ်ချပ်များတွင် ဗုဒ္ဓရုပ်ပုံတော်များခပ်နှိပ်ထားသောကြောင့် ဤဘုရားကို “ဗုဒ္ဓရုပ်ပုံတစ်ထောင်စေတီ” ဟူ၍လည်းလူသိများကြသည်။
လိကွမ်းဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသည် လွန်ခဲ့သော နှစ်ရာပေါင်းများစွာကတည်းကပင် ဘုရားဖူးသူများအဖို့ ပီကင်းမြို့ရှိ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ထင်ရှားသောနေရာတစ်နေရာ ဖြစ်ခဲ့သည်။ ခရစ်နှစ် ၁၉၀ဝ ပြည့်နှစ်တွင် နယ်ချဲ့ရှစ်နိုင်ငံမှ တပ်များသည် ပီကင်းမြို့တော်သို့ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးလုယက် ဖျက်ဆီးမှုကြောင့် ပျက်စီးမှုအမြောက်အများ ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ မြို့တော်ဆင်ခြေဖုံးရှိ လိကွမ်းဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့် ကျောက်ယှီး-ယန်းစေတီတော်တို့မှာလည်းအမြောက်လက်နက်များဒဏ်မှ မလွတ်ကင်းခဲ့ ကြချေ။ ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုများ ပြီးဆုံးသွားချိန်၌ ကျောင်းရှိဘုန်းတော်ကြီးများသည် ထိုနေရာကို ရှင်းလင်းကြသောအခါ ဗုဒ္ဓစွယ်တော် ကိန်းဝပ်တော်မူရာ ကျောက်သားကြုတ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ယနေ့ ရှန်းယှီးပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းတွင် ဟန့်ပြည်ထောင်သည် မင်းဆက် ငါးဆက်ကာလ (အေဒီ ၉၀ရ – ၉၆၀) နောက်ပိုင်းကာလအတွင်းတည်ရှိခဲ့သော ပြည်ထောင်ဖြစ်ပြီးနောင်အခါတွင် ဆုန်းမင်းဆက်၏ သိမ်းပိုက်ခြင်းကိုခံရသည်။ ထို့ကြောင့် ခရစ်နှစ် ၁၀၇၁ ခုနှစ်တွင် ထိုစေတီတော်၌ ဗုဒ္ဓစွယ်တော်ကိုဌာပနခဲ့ရာ ပြန်လည်တွေ့ရှိသည့် ၁၉၀ဝ ပြည့်နှစ်အထိဆိုလျှင် မြတ်စွယ်တော် ကိန်းဝပ်တော်မူခဲ့သော ကာလမှာ နှစ်ပေါင်း (၈၃၀) ကြာမြင့်ခဲ့ပေပြီ။
မြတ်ဗုဒ္ဓစွယ်တော်ကို ၁၉၀ဝ ပြည့်နှစ်တွင် ပြန်လည်တွေ့ရှိပြီးနောက်ပိုင်းရာစုနှစ်ဝက်ခန့် အတွင်းခေတ်ပျက် အခြေအနေဆိုးကြောင့် ဘုန်းတော်ကြီးများအဖို့ မြတ်စွယ်တော်ကိုထိုက်ထိုက် တန်တန် ပူဇော်ခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့ချေ။ တရုတ်ပြည် လွတ်မြောက်ပြီးသောအခါမှ ပီကင်းမြို့တော်ရှိ ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင်များ၏ ရှေ့ဆောင် ရှေ့ရွက်ပြုမှုနှင့် ပြည်သူ့အစိုးရ၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုတို့ကြောင့် ၁၉၅၅ ခုနှစ် တွင် မြတ်စွယ်တော်အားကွမ်ကျိဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသို့ ပင့်ဆောင်ခဲ့သည်။ စွယ်တော်အားရတနာခုနှစ်ပါးစီခြယ်သော ရွှေသားစေတီတော်အတွင်း ကိန်းဝပ်စံပယ်တော်မူစေပြီး သရီရအဆောင်တော်တွင် အပူဇော်ခံထားရှိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတို့မှ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ၏ မေတ္တာရပ်ခံချက်အရ မြတ်စွယ်တော်သည် အဆိုပါနိုင်ငံများသို့ တစ်ကြိမ်စီဒေသစာရီ ကြွချီခဲ့ရာဗုဒ္ဓဘာသာ ဝင်ပြည်သူများကသောင်းသောင်းဖြဖြလှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကြည်ညိုဖူးမြော်ခဲ့ကြသည်။
၁၉၅ရ ခုနှစ်တွင် တရုတ်ပြည်ရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသည် ဗုဒ္ဓယဉ်ကျေးမှုနှင့်အညီစေတီတော် သစ်တစ်ဆူတည်ရန် အဆိုပြုခဲ့ကြသည်။ မြတ်စွယ်တော်အားအစဉ်ဖူးမြော်နိုင်မည့် အတည်တကျ နေရာရှိရန်နှင့် ထူးခြားသော သမိုင်းဝင်စေတီတော်ဟောင်းနေရာကို ထိန်းသိမ်းရန်ဖြစ်သည်။ ဤသို့ဖြင့် ၁၉၅၈ ခုနှစ် နွေရာသီမှ ၁၉၆၄ ခုနှစ် နွေဦးပေါက်ရာသီကာလအတွင်း ခံ့ညားထည်ဝါလှသော စွယ်တော်စေတီတော်သစ်နှင့် အခြားသာသနာ့အဆောက်အအုံများကိုတည်ဆောက်ပြီးစီးခဲ့သည်။
အမြင့် (၅၁) မီတာရှိပြီးဘုံ (၃၁) ဆင့်ပါရှိသောစေတီတော်သစ်အားမြေပြင်မှ အမြင့် (၇.၇) မီတာနှင့် အကျယ်အဝန်း (၂၂) စတုရန်းမီတာရှိသောဖိနပ်တော်ပေါ်တွင် တည်ထားသည်။ စေတီတော်အား ဂန္တဝင် တရုတ်ဗုဒ္ဓယဉ်ကျေးမှုလက်ရာမပျက်စေရန် ခေတ်မီဆောက်လုပ်ရေးနည်းစနစ်များဖြင့် တည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အဆောက်အဦးခန်းမအလယ်တွင် ကျောက်သားဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ဝဇီရပလ္လင်တော်ရှိပြီးပလ္လင်တော်ပေါ်၌ မြတ်စွယ်တော်ကိန်းဝပ်ရာ ရတနာခုနှစ်ပါးစီခြယ်သော ရွှေသားစေတီကိုဖူးမြော်နိုင်သည်။
၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၂၅)ရက်နေ့တွင် တရုတ်ပြည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အသင်းသည် စွယ်တော်စေတီတော် စတင်ဖွင့်လှစ်သည့် ဘုရားပွဲတော် အခမ်းအနားအားကျင်းပခဲ့သည်။ ကမေ႓ာဒီးယား၊ သီရိလင်္ကာ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဂျပန်၊ လာအို၊ မွန်ဂိုးလီးယား၊ နီပေါလ်၊ ပါကစ္စတန်၊ ဗီယက်နမ်နှင့် တောင်ဗီယက် နမ်တို့မှ စသည့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ကိုယ်စားလှယ်များသည် မြတ်စွယ်တော်စေတီဖွင့်ပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့ ကြသည်။
တရုတ်ပြည် ဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော်ပွားသည် ပြည်မြို့ ရွှေပေါက်ပင်တောရကျောင်းတိုက်သို့ ၃.၈.၂၀၁၁ ရက်နေ့ ည (၁၂းဝ၀) နာရီအချိန်တွင် ရောက်ရှိကိန်းဝပ်စံပယ်ခဲ့ရာ ယင်းည၌ အဖြူရောင်အဆင်းရှိသောတောက်တဲ့ကြီးတစ်ကောင်လာရောက်ကြိုဆိုဖူးမြော်ခဲ့သလို ၄.၈.၂၀၁၁ ရက်နေ့ နံနက်တွင်လည်း မြန်မာတို့၏ ကျက်သရေဆောင် အထွတ်အမြတ်ထားရာဖြစ်သောဥဒေါင်းတစ်ကောင်သည်လည်း ရွှေပေါက်ပင် တောရကျောင်းတိုက်ဝင်းအတွင်းသို့ လာရောက်ဖူးမြော်ခဲ့ပုံကိုလည်း တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။
ထိုမျှလောက် ထူးခြားတန်ခိုးကြီးမားလှသောတရုတ်ပြည်မှ ဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော်ပွားနှင့် ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလတွင် ပြည်မြို့ ရွှေပေါက်ပင်တောရကျောင်းတိုက်သို့ ကြွရောက်လာခဲ့သောသီဟိုဋ္ဌ်ကျွန်း (သီရိလင်္ကာ)မှ ဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော်ပွားတစ်ဆူ (လူ့ပြည်ရှိဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော်ပွားနှစ်ဆူ)တို့သည် ပြည်မြို့ ရွှေပေါက်ပင်တောရကျောင်းတိုက်အတွင်း၌ သီတင်းသုံး ကိန်းဝပ်စံပယ်တော်မူနေပြီး ဖြစ်ပါ၍ ဗုဒ္ဓအနွယ် ဝင် မြန်မာပြည်သူ/သားအပေါင်း ကြွရောက်၍ အနီးကပ်ဖူးမြော်ကြည်ညိုနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါကြောင်းနိဗ္ဗာန် အကျိုးဆော်၍ နှိုးဆော်လိုက်ပါသည်။
ကမ႓ာ့ပြည်သူ/သားများ မြန်မာပြည်သူ/သားများ သောကကင်းဝေ ငြိမ်းချမ်းသာယာဝပြောကြပါစေ။
facebook မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
တောက်တဲ့ ကြီးက ဘယ်ကပါလာတာတုန်း ။အမလေး ကြက်သီးထစရာကြီး ။ မြတ်စွာဘုရားရဲ့စွယ်တော် တွေက အကြီးကြီး တွေပဲနော် ။ ရွာထဲမှာ ဖူးခွင့်ရလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓစွယ်တော် ဘယ်နေရာ၊ ဘယ်ဒေသမှာ ဘယ်နှစ်ရက် သီတင်းသုံးမယ်ဆိုတာလေးများ သိတဲ့သူများ ရှိရင် ပြောပေးကြပါဦး။ ရန်ကုန်မှာကော သီတင်းသုံးမှာလား သိချင်ပါတယ်။ ဖူးချင်လို့ပါ။ ဒီစွယ်တော်က ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းက မြန်မာပြည် ကြွလာပြီးကမ္ဘာအေးမှာ ကိန်းဝပ်စံပယ်အဖူးမြှော်ခံခဲ့ ဖူးတဲ့ စွယ်တော်မဟုတ်လား၊ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုတောင် ဖြစ်ခဲ့သေးတယ်လေ။
ဘယ်သူ့အစီအစဉ်နဲ့ပင့်လာတာလဲမသိဘူး။ ကိုကျော်သူကိုတွေ့တယ်ဆိုတော့ အစိုးရအစီအစဉ်တော့ မဟုတ်လောက်ဘူး။ TV တွေထဲမှာ သတင်းမပါလောက်ဘူးထင်တယ်။ TV သတင်းတွေလဲ မှန်မှန် မကြည့်ဖြစ်တော့ မသိဘူး။
ခုလို ဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော်ကို သေသေချာချာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖူးတွေ့ခွင့်ရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မြောက်ဦးမှာလဲ ဗုဒ္ဓအံတော် တဆူ ကိန်းဝပ်နေတာ ရှိတယ်လို့ ကြားသိရပါတယ်။ မြောက်ဦးရောက်တုန်း က ဖူးဖို့ သွားရောက်ခဲ့ပေမယ့် ဗုဒ္ဓအံတော် ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ ဆရာတော် ခရီးသွားနေလို့ ကိုယ်တိုင် မျက်မြင် မဖူးခဲ့ရပါဘူး။ ဓာတ်ပုံတော့ ဖူးခဲ့ရပါတယ်။ အံတော် သမိုင်းလဲ ဖတ်ခဲ့ရပါတယ်။ မြောက်ဦးက အံတော်ကတော့ ခုမြင်ရတဲ့ စွယ်တော်လို ဆင်စွယ်ရောင် ပြောင်ချော မဟုတ်ပါဘူး။ ဓာတ်ပုံထဲမှာ နှစ်ချို့ကျောက်သားအသွင်နဲ့ ဖူးခဲ့ရတာပါ။ သေချာတာကတော့ စွယ်တော်ကော အံတော်ကော ခုခေတ် လူသားတွေရဲ့ သွားတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် တော်တော်လေး ကြီးတာ ကို တွေ့ရပါတယ်။
ဗုဒ္ဓအံတော် စစ်မှန်တယ်ဆိုရင် ရဟန်းပြည်သူ ရှင်လူအများ ဖူးမြှော်နိုင်အောင် စီစဉ်ကြရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ။ သူများနိုင်ငံမှာ ကိန်းဝပ်စံပယ်နေတဲ့ စွယ်တော်ကို မြန်မာပြည်သူအများ ဖူးမျှော်နိုင်အောင် ပင့်ဆောင်နိုင်ဖို့ စီစဉ်နိုင်သေးတာပဲ.. မြန်မာပြည်က အံတော်ကို မြန်မာပြည်ကလူတွေ ဖူးနိုင်အောင် စီစဉ်ပေးသူများရှိစေချင်ပါတယ်။
နေပြည်တော်တွင် ယခုအခါ လူအများ စိတ်ဝင်စားလျက်ရှိသည့် ထူးဆန်းသော ကျောက်တုံးကြီးအား သွားရောက် လေ့လာ ကြည့်ရှုသူ များလျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။ လူအများ စိတ်ဝင်စားနေသည့် ကျောက်တုံးကြီးမှာ ကျိုက်ထီးရိုးဘုရား ကျောက်တုံးကြီးကဲ့သို့ပင် အလားသဏ္ဌာန် တူညီသော ကျောက်တုံးစွန်း တစ်ခုတွင် တည်ရှိနေပြီး အောက်ခံ ကျောက်တုံး အစွန်း၌ ဟန်ချက်ညီစွာ တည်ရှိနေပြီး တွန်းကြည့်က လှုပ်၏။ အောက်ခံ ကျောက်မျက်နှာပြင်နှင့် အပေါ် ကျောက်တုံး ထိစပ် မျက်နှာပြင်အောက်မှ ဝါးခြမ်းပြားနှင့် ထိုးကြည့်လျှင် လွတ်ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ ၎င်း ကျောက်တုံးကြီး တည်ရှိရာ နေရာမှာ နေပြည်တော် ပျဉ်းမနားမြို့ အရှေ့ဘက် ပေါင်းလောင်းမြစ်အား ကျော်လွန်ပြီး တောင်ပေါ် ကျေးလက်တိုင်းရင်းသားများ နေထိုင်ရာ ကူးတို့ဆိပ် ကျေးရွာအုပ်စု တောင်ဘက်စွန်း ရွှေပြည်သာယာ ကျေးရွာ အရှေ့တောင်ဘက် ကျောက်အိုင် တောင်ကြောပေါ်တွင် တည်ရှိပြီး ပျဉ်းမနားမြို့မှ သွားလျှင် ၁၂ မိုင် ၁၃ မိုင်ခန့် ဝေးကြောင်း သိရသည်။ ကျောက်တုံးကြီး တည်ရှိမှန်း သိရှိဖော်ထုတ်သူမှာ ပျဉ်းမနားမြို့၊ ကန်ဦးကျွန်းတော ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှ ဆရာတော် ဦးမာနိတ ဖြစ်ပြီး ဆရာတော်အား ၎င်းအရပ်၌ ကျိုက်ထီးရိုးဘုရား အဆင်းသဏ္ဌာန်တူ ကျောက်တုံးကြီးရှိကြောင်း အိပ်မက်အရ ဆရာတော် ဦးမာနိတနှင့် ပျဉ်းမနားမြို့မှ ဓာတ်ပုံဗီဒီယို ရိုက်ကူးရေး လုပ်ငန်း လုပ်သူ ဦးချစ်ကို၊ အဖော်နှစ်ဦး ပေါင်း လေးဦးတို့သည် အိပ်မက်ပါအတိုင်း ၎င်းအရပ်သို့ သွားရောက်၍ ဒေသခံတစ်ဦး ဖြစ်သည့် ကိုဟန်ငြိမ်းဦး ဆိုသူအား ဤတောင်ကြောပေါ်တွင် ကျိုက်ထီးရိုးဘုရား အလားသဏ္ဌာန်တူ ကျောက်တုံးကြီးများ တွေ့မိသလား မေးမြန်းရာမှ ဤတောင်ကြောတွင် အမှန်တကယ် ရှိကြောင်း ပြောသဖြင့် ကိုဟန်ငြိမ်းဦး လမ်းပြရှာဖွေရာမှ တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း ဆရာတော် ဦးမာနိတက မိန့်ကြားသည်။
“ဒီကျောက်တုံးကြီးက ဟိုကတည်းက ရှိနေခဲ့တာ။ ကျွန်တော်တို့ တောင်ကြောပေါ် ဒီကျောက်တုံးကြီးအောက် လိုဏ်ဂူထဲမှာ မီးသွေးဖုတ်စဉ်က ဒီကျောက်တုံးကြီးက တင်ရုံ တင်နေတာ။ ငလျင်တွေဘာတွေလှုပ်ရင် ကျောက်တုံးကို ပြုတ်ကျရင် အခက်တွေ့မယ်ဆိုပြီး ကုတ်နဲ့ လူငါးဦးခန့် ကုတ်နဲ့ ကော်ချခဲ့ဖူးတယ်။ လှုပ်သာလှုပ်တယ် ပြုတ်ကျမသွားဘူး” ဟု ဦးသိန်းလွင် (တပ်မတော်အငြိမ်းစား) ယခု ရွှေပြည်သာယာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ဆရာတော် ဖြစ်နေသည့် ဦးသုမနက ပြောပြသည်။ ကျောက်တုံးကြီး၏ အရွယ်အစားမှာ လုံးပတ် ၃၈ ပေ ၁ဝ လက်မ၊ အလျား ၁၈ ပေ၊ အနံ ၁၁ ပေ လေးလက်မ၊ အမြင့် ၁ဝ ပေ လေးလက်မ ရှိပြီး အောက်ခံ ကျောက်ပြားနှင့် ကျောက်တုံး ထိစပ် ဧရိယာ အလျား သုံးပေ ၉ လက်မ၊ အနံ နှစ်ပေ နှစ်လက်မ ရှိကြောင်း၊ ကျောက်တုံးကြီး ကျောက်စွန်းထွက် ဧရိယာမှာ ၆၆ ပေ ရှိကြောင်း သိရသည်။ “ဒီတောင်ကြောကိုတော့ ကျောက်အိုင်တောင်ကြောဟု ခေါ်တယ်။ ဘာလို့ ကျောက်အိုင်တောင်ကြောလို့ ခေါ်လဲဆိုရင် ဒီတောင်ကြောပေါ်မှာ အခု ကျောက်တုံးကြီးနှင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကျောက်အိုင်ကြီး ရှိပြီး ဒီကျောက်အိုင်ရဲ့ ရေအနက်ကတော့ လူကြီး လက်ခုပ်တစ်ဖောင် နက်တယ်။ အကျယ်ကတော့ ၁၅ ပေ ပတ်လည်ခန့် ရှိမယ်။ ကျောက်အိုင်ရဲ့ အနီးဝန်းကျင်မှာတော့ နတ်ရေတွင်း တစ်ခု ရှိတယ်။ အနက် တစ်ပေခွဲလောက် ရှိတယ်” ဟု ၎င်း ဒေသခံ ကိုဟန်ငြိမ်းဦးက ပြောသည်။ ယခုအခါ ၎င်း ကျောက်တုံး အထက်၌ စေတီတစ်ဆူ တည်ရန်အတွက် သာသနာရေး ဝန်ကြီးဌာနသို့ လျှောက်ထားရန် ဂေါပက အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်း ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်း ကျောက်တုံးကြီးအား လာရောက် လေ့လာသူများ မကြာခဏ ရောက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ဘယ်နေ့နောက်ဆုံးလဲ ဖူးမြော်ရမှာက ဘယ်တော့ပြန်ကြွမှာလဲ ၄ ရက်နေ့က ပုံတွေဆိုတော့လေ….
မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ ့စွယ်တော် ဓါတ်ပုံကို
ဖူးမြော်ခွင့် ရတဲ့ အတွက်
ယခုကဲ့သို ့ပြုသော ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်
ပျော်ရွှင် ကျန်းမာ ချမ်းသာ ပါစေ ဗျား
ကျွန်တော်တို့ လူမျိုးရဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာအပေါ်ယုံကြည်သက်ဝင်မှုက အံ့ဩလောက်စရာပါ။ မရှိတော့တဲ့ ဗုဒ္ဓရဲ့ သွားတစ်ချောင်းအပေါ်မှာတောင် အတော်တန်ဖိုးထားကြတယ်။
ဒါပေမယ့် အဲဒီစွယ်တော် (သွား) က ဘာဖြစ်လို့ သာမန်ထက်ကြီးနေရတာလဲ။ ဗုဒ္ဓလဲ လူသားတစ်ဦးပဲမဟုတ်ဘူးလဲ။ ဒီမေးခွန်းကို မေးချင်တာ အင်း ……၂၀၀၄ လောက်ကတည်းက။ နောက်ပြီး လူသွားနဲ့လည်း မတူဘူးနော်။
တယောက်ယောက်က….ရှေးးးးး ကထဲက… စွယ်တော်အစစ်ကို.. တခုခုနဲ့လဲထားလိုက်ပုံရပါတယ်.။ ဒါမှမဟုတ်.. စွယ်တော်အစစ်ဆိုတာကိုက.. မရှိခဲ့တာဖြစ်မှာပါ…။
သွားဆရာဝန်တွေ..ပါမောက္ခတွေကို .. စစ်ဆေးခိုင်းစေသင့်တယ်..။
အင်တာနက်မှာဆိုတော့ လူမျက်နှာပြစရာမလိုလို့ သတ္တိကောင်းကောင်းနဲ့ ရေးပါတော့မယ်။
(အဲဒီကျုပ်အယူအဆဆိုတာကလဲ မွေးကတည်းကပါတာတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့။ မဟာဂန္ဓာရုံ ဆရာတော်ဘုရားကြီး၊ မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီး စသည်တို့ရဲ့ ဟောပြောချက် ယူဆချက်တွေ ကြားနာမှတ်သားရင်း ခေါင်းထဲရောက်နေတာမျိုးပေါ့ ..။)
အဲ .. ကျုပ်အယူအဆကတော့ –
ဘုရားရှင်ဟာ လူစစ်စစ်ပဲဖြစ်ပြီး ၊ အဲဒီခေတ်ကလူတွေထဲမှာ ထူးထူးခြားခြား ထောင်ထောင်မောင်းမောင်းနဲ့ ခန့်ခန့်ငြားငြား ကိုယ်လုံးတော် အရပ်တော် ရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ ရိုးရိုးလူတွေနဲ့ အလွန်ကွာခြားအောင် အရပ်အမောင်း ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည် မရှိနိုင်ပါဘူး။ မကွာခြားဘူးလို့ ယူဆစရာ အထောက်အထားတွေ ကျန်းဂန်တွေထဲမှာ အမြောက်အများပါပါတယ်။
ကျမ်းတခုမှာက ဘုရားရှင်ရဲ့ အရပ်တော်ဟာ အတောင်ရှစ်ဆယ် ရှိတယ် လို့ဆိုထားပါတယ်။ အဲဒီကျမ်းကို ပျင်းလို့ အကျိုးလဲမရှိလို့ မရှာပြတော့ပါဘူး။ ဒီမှာပြောချင်တာက အဲဒီ ပါဠိကျမ်းဂန်တွေမှာပါတဲ့ အတောင် တို့ အလံ တို့ ယူဇနာတို့ ဆိုတာတွေက –
(၁) ဖေါ်ပြထားတဲ့ ကျမ်းတနေရာနဲ့တနေရာမှာ အတိုင်းအတာချင်းမတူကြဘူး။ အဲဒါကြောင့် အရင်ကျမ်းဂန်ထဲကဟာတွေကို ဒီကနေ့ တိုင်းတာတွက်ချက်ကြည့်တော့ တယူဇနာက်ိုပဲ တချို့နေရာမှာ ရှစ်မိုင်ကျော်ကျော်နဲ့ တချို့နေရာမှာ ဆယ့်နှစ်မိုင်နီးပါးဖြစ်နေတာ။
(၂) အဲဒီဝေါဟာရတွေကို ကောက်ယူရပုံချင်းလဲ မတူကြဘူး။ ဥပမာ အတောင် ဆိုတာကို တချို့က သံတောင် (၁၂လက်မခန့်) တချို့က လက်သမားတောင် (၁၈လက်မခန့်) တချို့က မိုက်(၆လက်မခန့်) တချို့က လက်သမားမိုက်(၄လက်မခွဲခန့်) တချို့က လက်သစ် ( ဒသမရှစ်လက်မခန့်) လို့ အမျိုးမျိုးကောက်ယူကြောင်း ကြားဘူးပါတယ်။
(၃)အရေအတွက် အတိုင်းအတာ အချင်အတွယ်တွေကို ကျမ်းဂန်တွေထဲတွေ့ရရာမှာ အမြောက်အများက နဲကြောင်း များကြောင်း တင်စားရေးသားထားတာ တွေသာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ သာဝထ္ထိမှာ လူဦးရေ ကိုးကုဋေရှိတယ်ဆိုတာမျိုး (တကယ်တော့ အဲဒီခေတ်ကလူဦးရေနဲ့တွက်ရရင် အိန္ဒိယ တိုက်ငယ်တခုလုံးတောင် ကိုးကုဋေမှ ပြည့်ပါ့မလားပဲ)။ ဥပမာ မြတ်စွာဘုရားတောထွက်တော့ ဗိုလ်ခြေတထောင်ဖွင့်မှရတဲ့ (…အောင်အလွန်လေးလံတဲ့) တံခါးကြီး အလိုအလျှောက်ပွင့်သွားတာမျိုး။ တံခါးတချပ်ကို လူတစ်ထောင် ဝိုင်းပြီးတွန်းရွေ့ဘို့ ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ လူအများကြီး(လေးငါးရှစ်ယောက်) ဝိုင်းဖွင့်မှရတဲ့တံခါးလို့သာ ဆိုလိုဟန်ရှိပါတယ်။
ဒီမှာတော့ ဘုရားကိုယ်တော်သည် လူရိုးရိုးနဲ့သိပ်မကွာဘူးဆိုလျှင် ဘုရားသွားတော်သည် လူရိုးရိုးရဲ့သွားတော်နဲ့ သိပ်မကွာနိုင်ပါဘူး။ ကွာနေရင် ကိုယ့်သဒ္ဓါလေးလဲ မပျက်ချင်ရင် – ဘုရားသွားတော်ကို ရည်မှန်းပြီး တခုခုကို ထုဆစ်ကိုးကွယ်ထားတာ လို့သာ ယူဆရုံရှိပါတယ်။
တကယ်တော့ ဘုရားရှင်အစစ်ကို မမီလိုက်လို့ ကြည်ညိုကိုးကွယ်ခွင့်မရလိုက်တဲ့ ကျုပ်တို့နောက်လူတွေအဖို့မှာ လက်ရှိကြည်ညိုစရာတွေဖြစ်တဲ့ ဓါတုစေတီ(စွယ်တော် ဆံတော် ဓါတ်တော်) ဥဒိဿက စေတီ(ရုပ်ပွားတော်များ၊ဆင်းတုတော်များ) ပရိဘောဂစေတီ(ရွှေတိဂုံကဲ့သို့ ဓါတ်တော်ဌာပနာရာစေတီများ) ကို –
ကြည်ညိုပူဇော်ကြရာမှာ အဲဒါတွေက “အထိမ်းအမှတ်သက်သက်” သာဖြစ်ပြီး အဓိက က ဘရားရှင်ရဲ့ ဂုဏ်တော်ကို ရည်မှန်းပူဇော်ရတာ သာဖြစ်ပါတယ်။ ကျုပ်တို့ဘာသာက ရုပ်ထုဆင်းတု ကိုးကွယ်တဲ့ (ဟိန္ဒူကဲ့သို့) ဘာသာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ အဲသည်လိုနားလည်ရင် သွားတော်ပုံကြီးကြီးသေးသေး ရုပ်တုတော်လှလှ မလှလှ စေတီတော်မြင့်မြင့်မမြင့်မြင့် အရေးမကြီးတော့ပါဘူး။ အဲဒါတွေက အကာ တွေပါ…။
ဒီကွန်မင့်ကို တော်တော်သတ္တိမွေးပြီး ရေးရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဖတ်မိတဲ့သူများ ဖြစ်နိုင်ပါက မကြိုက်ရင်မကြိုက်ကြောင်း ပြန်ပြောစေလိုပါတယ်။ (ဒါမှဒီလူကြီးနောင်ကျဉ်သွားမှာ)
ကြိုက်တယ် ဦးပါလေရာ..စွယ်တော်” ပွါး” ပါဆိုမှ…….
တခြားသူတော့ မသိဘူး ကျွန်တော်တော့ ကြိုက်ပါတယ် ပါလေရာကြီးရဲ့
အပေါ်က susunosuki လိုလဲ တစ်ခါတစ်လေတော့ စဉ်းစားမိတယ် တစ်ခါမှတော့ သူလို မမေးဖြစ်ဘူးပေါ့
အပြောမတတ်လို့ foul သွားပါတယ်။
ပြောလိုရင်းက မကြိုက်ရင် မကြိုက်တဲ့အကြောင်း dislike ပေးဘို့ပါ။ ဒါမှ အနီဘယ်လောက် ရတယ်ဆိုတာကြည့်ပြီး ဒါမျိုး ဆက်ရေးသင့်မရေးသင့် ချိန်ဆချင်လို့ပါ။ မကြိုက်သူများတဲ့ကြားက ဒါမျိုးဇွတ်ရေးရင် ကောင်းကျိုးထက် ဆိုးကျိုးများမှာ မို့ပါဗျာ …။
သင့်လျှော်တဲ့ ကြောင်းကျိုးပြချက်တွေနဲ့မို့ (ကိုယ်ဖတ်ရှု့လေ့လာထားတာတွေနဲ့လည်း ကိုက်ညီလို့) သဘောကျပါတယ်။ သဒ္ဒါတရားကို မှန်မှန်ကန်ကန် ဖြစ်ပေါ်စေလို့ ကောင်းကျိုးတွေရစေတာမို့ ရေးသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ Like Dislike အနီအစိမ်းတွေကလည်း ပေးပြီးပျောက်သွားတတ်လို့ ကွန်မန့်နဲ့ပဲ ထောက်ခံလိုက်ပါတယ်။
တချို့သတင်းအချက်အလက်တွေ၊ ရေးသားသုံးနှုံး ပြောဆိုမှုတွေဟာ သူ့ခေတ် သူ့အခါနဲ့တော့ ဆိုလိုရင်းကို နားလည်ကြပေမယ့် နောင်နှစ်ပေါင်း ရာထောင်ချီတဲ့အခါမှာ နှောင်းလူတွေအတွက် သဘောပေါက် နားလည်မှု လွဲသွားနိုင်တာလေးတွေရှိတတ်ပါတယ်။
ဥပမာ – ခုခေတ် ဘုရားစေတီပုထိုး ထီးတော်တင်တဲ့ ကိစ္စတို့၊ ဌာပနာ တဲ့ကိစ္စတို့မှာ တခါတလေ အခမ်းအနားကို ကြီးကျယ် ခမ်းနားစေဖို့အတွက် လူတွေက နတ်ဝတ်စုံ၊ ဗြဟ္မာဝတ်စုံတွေဝတ်ပြီး လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးရပါတယ် ။ အဲဒီလို အခမ်းအနားမျိုးကို သတင်းတွေထဲမှာ သတင်း အဖြစ် ရေးသားဖေါ်ပြတဲ့အခါ နတ်၊ ဗြဟ္မာများခြံရံလျက်လို့ပဲ သုံးနှုံးကြပါတယ်။ ဘယ်သတင်းမှာမှ နတ်ဝတ်စုံ၊ ဗြဟ္မာဝတ်စုံ ဝတ်ဆင်ထားသော လူများခြံရံ လိုက်ပါလျက်လို့ မရေးကြပါဘူး။ အခုခေတ် လူတွေကတော့ ဒါကို နားလည်ပါတယ်။ ဒီရေးသားချက်ဟာ တကယ့် နတ်တွေ၊ ဗြဟ္မာတွေကို ဆိုလိုတာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ အားလုံးသိကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီအရေးအသား အသုံးအနှုန်းနဲ့ သတင်းဖေါ်ပြချက်ကို နောင် နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ဝ လောက် ကြာလို့ အဲဒီခေတ် မှာရှိမယ့် လူတွေက ဖတ်ကြည့်လိုက်ရင် အဓိပ္ပါယ် တမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၂၀၀ဝ ကျော်က ဗုဒ္ဓခေတ်က အကြောင်းအရာတွေကို ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ စဉ်းစားချင့်ချိန် လက်ခံရမှာပါ။ ကိုယ်က သမိုင်းကို ဖေါ်ထုတ်နေတဲ့သူ မဟုတ်ရင်တော့ ဒီအကြောင်းအရာ
တွေကို မဟုတ်ဘူး၊ ဟုတ်တယ် အငြင်းပွားနေဖို့ တာဝန်မရှိပါဘူး။ ကိုယ့်ခေတ်မှာ ရေးသားဖေါ်ပြ
ပြောဆို သုံးနှုံးနေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကလဲ နောင်နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ဝ ကျော် ၂၀၀ဝ လောက်မှာ အလွဲလွဲအမှားမှား အဓိပ္ပါယ်ကောက် ယူသွားနိုင်တာပဲလေ။ အဲဒီခေတ်ကလူတွေ သူ့ဟာသူ ချင့်ချိန်ပြီး ယုံကြပါလိမ့်မယ်။ သိပ်အစွန်းမရောက်ကြဖို့ပဲ အရေးကြီးပါတယ်။